🥇 ▷ Astaamaha Oppo Reno 2 iyo dhammaan noocyadeeda kala duwan ayaa si faahfaahsan loosoo sharraxay ✅
Astaamaha Oppo Reno 2 iyo dhammaan noocyadeeda kala duwan ayaa si faahfaahsan loosoo sharraxay
Maalmihii la soo dhaafay waxaan wax badan ka hadlaynaa Oppo Reno 2, oo ah nooca xiga ee leh kamarad shaashadda leh. Farsamo ahaan, ka hadalka hal nooc ma saxna, maxaa yeelay eWaxaan eegaynaa ilaa seddex nooc oo kala duwan oo garoonkaan ah, mid kasta oo leh qeexitaanno kala duwan, in kasta oo sida la filayo, Oppo Reno 2 si loo qalajiyo waa midka soo jiidata dareenka ugu badan si ay u noqoto qoyska ugu weyn. Maanta astaamaha saddexda moodal ayaa si qotodheer u faafay.
Astaamaha Oppo Reno 2 ayaa la sifeeyay ka dib marinka taleefanka iyada oo loo sii marayo TENAA, shahaadada Shiinaha taas Marar badan waxay shaaca ka qaadday muuqaalada iyo qaabeynta taleefanno kala duwan. Marka loo eego astaamaha labada nooc ee kale, waxaa madiyey Mysmartprice, portal news oo sidoo kale shaandheeyay macluumaad gaar ah munaasabado badan.
Tilmaamaha la sifeeyay ee Oppo Reno 2
Sidii aan soo aragnay, Oppo Reno 2 wuxuu soo bandhigi doonaa shaashad 6.5-inji ah, oo aan lahayn meegaar ama xaraf, wax aan ku ogaanay sawirradeeda xayeysiinta ah ee la shaandheeyay Shaashadani waxay lahaan doontaa teknoolojiyadda OLED, sidaa darteed akhristaha faraha ayaa la dhexgelin doonaa. Ku saabsan xallinteeda, waa FullHD + (2,400 x 1,080 pixels), sidaa daraadeed qaabkiisu wuxuu noqon doonaa 20: 9, ku dhawaad ​​sidii loo yaqaan ‘Sony Xperia 1’ ama ‘Motorola One Action’.
Haddii waxa danahaagu yahay inaad ogaato faahfaahinta qalabkaaga, waxay noqon doontaa Qualcomm Snapdragon 730G, nooca dusha laga saaray ee Snapdragon 730 ee aan horay ugu helnay Xiaomi Mi 9T, tusaale ahaan. Qalabkaani waxaa wata 8 GB oo ah RAM iyo 128 ama 256 GB oo kaydinta gudaha ah.
Sidaan ka baranay isaga shaaha Telefoonka, Oppo Reno 2 waxay lahaan doontaa afar kaamirooyin gadaal ah, oo xallin doona 48 + 8 + 13 + 2 megapixels. Waxaan dareensannahay in kaamirooyinka ay u dhigmaan: ugu weyn, dhaweyn, xagal ballaaran iyo qoto dheer. Dhankaas, Oppo Reno 2 waxay umuuqataa inay tahay mid aad u dhameystiran. Batteriga marinkaan ayaa gaari doona 4,065 mAh, marka waa inaanu ka walwalayn inaanu ku yaraano madaxbannaanaanta isla markaana aan ku ridi karno si dhakhso leh oo loo yaqaan Oppo VOOC 3.0.
Tilmaamaha la sifeeyay ee Oppo Reno 2Z
Ku sii wadista moodooyinka cusub ee ‘Oppo’, Oppo Reno 2Z, oo ka duwan kuwii kaa horreeyay oo leh magac la mid ah, haa waxay yeelan doontaa kamarad wax lagu sawiro oo motori ah, waxaan u qaadaneynaa sidoo kale qaab faakis ah. Annagu garan mayno astaamo badan sida moodhalka caadiga ah, laakiin waxaa la rajaynayaa inay yeelato shaashad 6.53-inji ah oo ku taal FullHD + xalka ay ilaaliso Corning Gorilla Glass 5.
Gudaha, Processor-ka la soo xulay wuxuu noqon doonaa MediaTek Helio P90, Moodeel aanan hore ugu arag wax tasiilaad ah, laakiin waxaan u badan nahay inaan ku aragno Xusuusta Redmi 8. Adoo raacaya processor-kaan, 8 GB oo RAM ah iyo 256 GB oo kaydinta gudaha ah. Batteriyadiisu waxay gaadhi doontaa 4,000 mAh waxayna sidoo kale taageeri doontaa dallacsiinta degdegga ah ee VOOC 3.0.
In kasta oo ay xoogaa ka caqli badan tahay nooca caadiga ah, Oppo waxa kale oo ay rabtay in ay afar kamaradood gadaal ka dhigto moodeelkan. Aaladda ugu weyn ayaa noqon doona 48 megapixels, oo ay weheliso xagal ballaadhan oo 8 ah iyo laba kamarad oo 2-megapixel ah si loo wanaajiyo nuxurka, xitaa qaab muuqaal ah.
Oppo Reno 2F, ugu qarsoon
Ugu dambeyntiina, waxaan sidoo kale arki doonnaa nooc magac ah oo la yiraahdo Oppo Reno 2F. Waxaan u qaadanay inay noqon doonto waxa ugu aasaasiga ah, gaar ahaan maxaa yeelay qiimaheeda in la badalo wuxuu noqon doonaa 252 euro. Waxa kaliya ee aan ka ognahay isaga ayaa ah inuu sidoo kale yeelan doono 48 megapixel camera, in kasta oo uu kaga duwan yahay labada nooc ee kale, wuxuu hirgalin doonaa aaladda ay soo saarto shirkadda Samsung, halkii uu ka ahaan lahaa Sony IMX 586.